Ho'oponopono: nzuzo nke ndi Hawaiian na-agwọ ọrịa - Afrikhepri Fondation
Ho'oponopono: Ihe Nzuzo nke Ndị Na-agwọ Ọrịa Hawaii
Lọ dị mfe nke usoro ho'oponopono a, ga-eju gị anya na n'otu oge ahụ, ịgụ akwụkwọ a ị ga-enwe obi abụọ na ị chọtara ihe ọmụma ochie echefuru echefu. Ma ihe ijuanya gị ga-akawanye njọ mgbe ị tinyere ya n'ọrụ. Ọ ga-eju gị anya mgbe ahụ mgbanwe ndị ga-ewere ọnọdụ na ndụ gị. Ho'oponopono na-eme ka anyị ghọta na ihe ọ bụla na-eme na ndụ anyị bụ naanị nsonazụ nke ncheta na mmemme na-amaghị nke dị n'ime anyị na nke na-atụ anyị mkpọrọ n'ime ụwa nwere ahụhụ. Site na ihicha ihe ncheta na-ezighi ezi site na ho'oponopono, nsogbu ndị ahụ na-abanye na ndị na-anabata ọdịbendị anyị wee si otú a na-eme ka anyị nweghachi ezigbo njirimara. Ho'oponopono gosikwara na anyị niile ejikọtara ma dị n'otu site na njikọ nke ịhụnanya. Ozi a, ho'oponopono na-akpọ anyị òkù ka anyị hụ ya na ndụ anyị kwa ụbọchị. Ọ na-enye anyị ụzọ ọhụụ nke ibi ndụ ebe ihe kachasị mkpa bụ ịzụlite Udo gị. Ọ ga-agbasazi n’akụkụ anyị wee weta mgbanwe anyị chọrọ n’ụwa gbara anyị gburugburu.
Usoro nke usoro Ho’oponopono pụtara n'ụdị dị mfe: Ndo! Ndo! Daalụ! Ahụrụ m gị n'anya! N'ọnọdụ esemokwu, oke mmetụta, ọnọdụ siri ike ma ọ bụ echiche na-ezighi ezi, anyị bụ ndị nwere onwe anyị na ndị nwere ibu ọrụ. Site na ịgụghachi usoro ahụ, anyị na-amụta ịhapụ ihe, ka ị nọrọ ebe dị anya site na ihe na-eme anyị na ịmegharị ihe anyị tụrụ anya. N'ọnọdụ ọ bụla usoro a na - akwado enweghị mmerụ ma ọ bụ mmegbu. Kama, ọ na - agba ume ka a na - ege ntị nke ọma - ihe na - eme mgbe mmadụ nwere nsogbu - kama ịbanye n'echeghị ebubo, ebubo ma ọ bụ omume ọjọọ.
Nkọwa nke usoro
Nke a bụ ihe okwu ọ bụla pụtara na ihe ọ na-ewetara anyị mgbe anyị na-azaghachi usoro ahụ.
"Ndo" Anyị maara ọnọdụ nke na-eme anyị. Anyị na-edebe ya ma nabata ya.
"Ndo" : Anyị na-agbaghara onwe anyị, ndị ọzọ ma ọ bụ ọbụna na Eluigwe na ala iji mee ka anyị dịrị ndụ n'ọgụ a. Ngbaghara na-eweta ntọhapụ maka ma onye na-enyefe ma onye na-anabata ya. Anyị anaghị ebo ebubo, anyị agbaghara. Ọ dị nnọọ iche. Ịgbaghara mmehie nwere ike imezi nsogbu ahụ nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị anaghị eme ya. Anyị na-eburu ọrụ maka ihe na-eme.
"Ekele gị" : Anyị na-eme ka ọnọdụ a pụta ìhè site n'ịchọta ihe ọ kụziiri anyị nakwa ihe o nyeworo anyị ka anyị "dị ọcha" n'onwe ya. Obi ekele na-enye aka ime mgbanwe dị mma.
"M hụrụ gị n'anya" N'ihi ya, anyị na-alaghachi n'ịhụ kama ịnọ na nhụghasị.
Uru nke Hooponopono
Ho'oponopono na-ewetara anyị na:
Mee ka obi eruo ala ma belata nchekasị
Nweghachi ikike na ndụ anyị
Kpochapụ echiche ọjọọ
Nyegharịa uche anyị n'echiche ziri ezi
Nwee obi mgbawa na obi ọjọọ na nsogbu
Mee nlezianya ma bie ndụ na nkwekọrịta [wpdiscuz-feedback id = "uafmh6n6bu" question = "Kedu ihe ị chere? »Emeghere =» 1 ″] [/ wpdiscuz-nzaghachi]
Ho'oponopono: ihe nzuzo nke ndi ngwo oria Hawaii
14 ọhụrụ site na .8,70 XNUMX
30 ejiri site na € 1,26
Zụta € 8,70
Emelitere ikpeazụ na June 22, 2021 11:24 PM
Idozi esemokwu site na nkwukọrịta na - anaghị eme ihe ike - Marshall Rosenberg (Audio)
Ezigbo ihe kpatara ọrịa cancer
Obere nwa - Antoine de Saint Exupéry (Audio)
Etu esi emegharị ekwentị gị ochie na nkata ọla edo